पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन ! आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल बैशाख ९ गते आईतबार तदानुसार अप्रिल २२ तारीख « Light Nepal
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन ! आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल बैशाख ९ गते आईतबार तदानुसार अप्रिल २२ तारीख
Published On : 21 April, 2018 11:56 pm
आज श्री शाके १९४० बि.स. २०७५ साल बैशाख ९ गते आईतबार इश्वी सन २०१८ अप्रिल २२ तारीख बैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथी चन्द्रमा मिथुन राशिमा १४:५३ बजे सम्म पश्चात कर्कट राशिमा सुर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु रवि सप्तमीब्रत गगांसप्तमी गंगोत्पत्ति पृथ्वी दिवस – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
एक्लो निर्णयले दाजुभाई बिच मनमुटाब रहन सक्ला । मध्यान पश्चात भने पारीवारिक साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मद्दत पूग्नेछ । परीश्रम अनुरुप फल प्राप्ति नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनसक्छ ।
दीर्घकालिन फाईदा मुलक कामको सुरुवात हुन सक्नेछ । मध्यान पश्चात भने पराक्रममा बृद्यि हुनेछ । मानसिक चन्चलताले गर्दा कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । नजिकका ब्यक्ति बाट बिश्वासघात हुन सक्छ ।
बौधिक ब्यक्तित्वहरुको सहयोगले कार्य सम्पादनमा बिशेष फाईदा हुनेछ । मध्यान पश्चात भने खानपानको गडबढीले स्वास्थमा सामान्य बाधा आउन सक्छ । प्रियमित्रहरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ ।
कुराकाट्ने हरुको बृद्धि हुनेछ । परोपकार को क्षेत्रमा मन जानेछ । सामान्य चोट पटकको सम्भाबना रहेको छ । मध्यान पश्चात भने मन प्रशन्न रहनेछ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ ।
मित्र जनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने योग रहेको छ ।कार्र्य कुसलताले मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ । मध्यान पश्चात खर्च बढ्ने सम्भाबना रहेको छ ।
पारीवार तथा ईष्टमित्र सगँको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । मध्यान पश्चात भने दाजु भाई तथा इष्ट मित्र बिच सम्बन्ध सुधार रहनेछ । आफन्त जन बिच भेटघाट हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । पराक्रममा बृद्धि हुनेछ ।
साझेदारी कामको आम्दानि भने उत्तम रहनेछ । आँट र शाहासको बृद्यि हुनेछ । मध्यान पश्चात भने कार्य सम्पादनको क्षेत्रमा सामान्य झन्झट ब्यर्होनु पनेछ । मान्यजन बिचको सम्बन्धमा सामान्य खटपट रहन सक्नेछ ।
साधारण चोट पटक लाग्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ । मध्यान पश्चात भने सामान्य यात्राका निम्ती खर्च गर्नु पर्न सक्नेछ । साधारण कार्य सम्पादनका निम्ती धेरै सघंष गनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ ।
ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो आम्दानि हुने योग रहेको छ । मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । मध्यान पछि भने शारीरिक आलस्यताले सताउन सक्नेछ । धनमालमा सामान्य क्षति हुने योग रहेको छ सजग रहनु होला ।
आम्दानि क्षेत्र सबल रहेता पनि स्बास्थमा सामान्य बाधा आईपर्ने छ । मध्यान पश्चात भने दाम्पत्य शुखमा केहि समस्या देखा पर्न सक्नेछ । झन्झटमय यात्राको सामना गर्नु पर्ला । शुभ चिन्तक हरुको सङख्या बढ्नेछ ।
आम्दानि क्षेत्र मजबुत रहेता पनि स्वास्थमा साधारण समस्या देखा पर्न सक्नेछ । मध्यान पश्चात भने प्रतिस्पर्दा मुलक कार्यका क्षेत्रमा सबल रहिनेछ । आत्मबल तथा निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । साझेदारी कामको आम्दानि भने उत्तम रहनेछ ।
सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । मध्यान पश्चात बिद्या प्राप्तिको समय रहेको छ । बोलिको प्रभाबको कारण मान्यजन को साथ पाईनेछ । माल सामान को क्षति ब्यहोर्नू पर्ला सजग रहनु होला ।